myths about puerperium and things you should do and don't - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
myths about puerperium and things you should do and don’t
မီးတှငျးကာလ အယူအဆမှားမြားနှငျ့ သတိပွုစရာလေးမြား
” ကိုးလ လှယျ ဆယျလ ဖှား ” အမြိုးသမီးတဈယောကျ ကိုယျဝနျစရှိတာနဲ့ “မဗိုကျ မဗိုကျ”နဲ့ .. အိမျက လူတှေ သဲသဲလှုပျ ဂရုစိုကျကွသကိုး… ကိုယျဝနျဆောငျနတေုနျးလညျး ကလေးအတှကျ ပူရ… အမအေတှကျ ပူရနဲ့…. ဆေးနညျးဆိုတာ တဈယောကျတမြိုး… ရိုးရာနဲ့ မကိုကျဖူး… နနေံ့နဲ့ မလိုကျဖူး.. မှေးမယျ့ခြိနျရှေးပါဟဲ့… ရကျကောငျးမှ မွတျမယျ… ဒီလို မှေးလာမယျ့ ကလေးကို ခဈြကွသလို မမဗိုကျကိုလဲ ခဈြကွတော့…ဟိုဟာစိတျမခြ ဒီဟာ စိတျမဖွောငျ့.. မှေးဖှားပွီးသညျ့တိုငျ ဗြာမြားကွသကိုး…
ဒါတငျလားဆိုတော့ မဟုတျသေး… မီးဖှားပွီးတဲ့အခါမှာလညျး ဟိုဟာ မစားရ ဒီဟာ မစားရ .. ကလေးနဲ့ မတညျ့ အမနေဲ့မတညျ့.. ဒါမြိုးတှေ ပွောရငျးက လှဲမှားနတောလေးတှေ ရှိတတျပွနျပါတယျ… ဒီလို အယူအဆ မှားလေးတှနေဲ့ သတိထားသငျ့တဲ့အခကျြ အခြို့ကို ပွောပွခငျြပါတယျ…
” ရအေေး မသောကျရဘူး.. အနာမကကျြပဲနမေယျ… ရနှေေး (သို့) ပူနှေးနှေးအရညျလေးပဲသောကျ ”
– မီးတှငျးကာလမှာ ရအေေးသောကျရငျ အအေးမိ ခြောငျးဆိုးမယျ… ကလေးကို နို့တိုကျတဲ့ခါ ကူးမယျ… အအေးကွောငျ့ အနာကကျြနစေမေယျ စသဖွငျ့ စိုးရိမျစိတျနဲ့ ပွောကွပါတယျ… သို့ပမေယျ့ .. ရအေေးကွောငျ့မို့ မီးနသေညျကို ထိခိုကျတာမြိုး မရှိနိုငျပါလို့.. သုတသေနပွလုပျသူမြားက ဆိုကွပါတယျ.. ဒါပွငျ အပူပိုငျးဒသေက မိခငျတို့အတှကျ ပူပွငျးရတဲ့ထဲ ရနှေေးပူကိုသောကျနရေတာ ခကျလှပါတယျ.. မိခငျဟာ ကလေးကို နို့ခြိုတိုကျကြှေးဖို့ လုံလောကျတဲ့ ရပေမာဏ ရရှိဖို့သာ အဓိက ဖွဈပါတယျ.. ဒါကွောငျ့ စိတျထဲ ရှိတာ သောကျပါစေ…
“အရှကျတှေ မစားနဲ့.. အသားဆို ဟိုအသား ဒီအသားရှောငျ ”
– ကိုယျဝနျဆောငျနစေဉျကလညျး ဝမျးကွာတိုကျထဲက သန်ဓသေားလေးအတှကျ မိခငျဟာ အားရှိနဖေို့ လိုသလို.. မီးဖှားပွီးကာလမှာ.. အားအငျပွနျပွညျ့ဖို့ရယျ.. ကလေးကို နို့တိုကျဖို့ရယျအတှကျ ပိုမို အားဖွညျ့တငျးရပါမယျ.. ဒါကွောငျ့ အာဟာဖွဈသော အသီးအနှံ၊ အသားငါး အကုနျကြှေးနိုငျပါတယျ..
” ကလေးကို နို့တိုကျတဲ့အခါမှာ မိခငျပိနျသှားတတျတယျဆိုတဲ့ အယူအဆ “ဟာ မှားပါတယျ … မိခငျအတှကျ လုံလောကျတဲ့ အဟာရ ရရှိအောငျ စားသောကျရုံဖွငျ့ ကလေးကိုလဲ နို့တိုကျနိုငျသလို မိမိလဲ ဝိတျမကသြှားပါဘူး…
-တခြို့သော မိခငျတှမှော မိမိနဲ့ မတညျ့တဲ့ အစားအစာမြိုး ၊ allergy ထတတျတာမြိုးဆိုရငျတော့ တခါတရံမှာ ကလေးကိုသာ သကျရောကျနိုငျတာမို့ .. ရှောငျသငျ့ပါတယျ
– ” အရကျ ” သောကျတတျတဲ့ မိခငျတှေ အဖို့ မီးတှငျးကာလရော မှေးဖှားပွီး လေးငါးလထိ အရကျမသောကျသုံးသငျ့ပါဘူး… သို့မဟုတျပါက မိခငျနို့ရညျထဲက alcohol ဟာ ကလေးဆီရောကျသှားနိုငျပါတယျ..မိခငျကဲ့သို့မဟုတျပဲ ကလေးရဲ့ အသညျးဟာ သိပျမဖှံ့ဖွိုးသေးတာမို့ အသညျးကို ထိခိုကျစနေိုငျပါတယျ
-ကဖငျးဓာတျမြားလှနျးတဲ့ဟာတှေ မသောကျပါနဲ့.. ကလေး အအိပျနညျးတာ…ကနာမငွိမျတာတှေ ဖွဈတတျပါတယျ…
– အစားအသောကျတှဟော အဟာရ မြိးစုံအရသာ မြိုးစုံ ပါဝငျပွီး.. တခြို့သော အစားအသောကျလေးတှရေဲ့ အရသာက မိခငျရဲ့နို့ရညျမှတဆငျ့ ကလေးကိုပါ ပေးစှမျးနိုငျတာမို့ ကလေးလေးလဲ အရသာ စမျးလို့ရပွီပေါ့..
“မီးနသေညျဆိုတာ.. နှေးနှေးထှေးထှေးနရေမယျ.. အအေးမခံနဲ့… လေးစိမျးတိုကျမခံနဲ့.. ပနျကာ အဲကှနျး မဖှငျ့နဲ့ … ရမေခြိုးရဖူးနျော…”
– မီးနသေညျနဲ့ ကလေး နထေိုငျရမခကျဖို့ကသာ အဓိက ဖွဈပါတယျ.. အဲကှနျးပနျကာ ဖှငျ့ခွငျးက မထိခိုကျစနေိုငျပါဘူး.. ဒါပွငျ အပူကွောငျ့ ထှကျတဲ့ အဖုအပိမျ့တှကေိုလဲ သကျသာစနေိုငျပါတယျ…
– သာမနျလူဖွဈဖွဈ မီးနသေညျ ဖွဈဖွဈ.. တကိုယျရညျ သနျ့ရှငျးမှုဟာ အရေးပါလှပါတယျ.. ဒါကွောငျ့ ပုံမှနျ ခွထေောကျလကျတောကျဆေးခွငျး၊ ရခြေိုးခွငျး ပွုလုပျနိုငျပါတယျ… အရပွေားမှ အနာကို ပိုးမှားကူးစကျတာတှကေိုလဲ လြေ့ာပါးစနေိုငျပါတယျ..
– မီးဖှားပွီး နောကျပိုငျးမှာလဲ အားအငျ အလုံအလောကျရှိဖို့ အားဆေးတှေ ဆကျသောကျနိုငျပါတယျ…
– သှေးမြားစှားဆုံးရှုံးထားတဲ့အတှကျ ပွနျလညျဖွညျ့တငျးဖို့ရာ လိုအပျသော ဆေးကို ဆရာဝနျမှ ညှနျကွားထားသညျ့အတိုငျးသောကျပါ..
– တခြို့ အမြိုးသမီးတှဟော မှေးဖှားပွီးခြိနျမှာ စိတျဓာတျကတြာ၊ ဝမျးနညျး အားငယျတာတှခေံစားရတတျတာမို့ မိသားစုမှ နှေးထှေးကွငျနာပါ…
ကနျြးမာသာယာ ပြျောရှငျသော မိသားစု ဘဝကို ပိုငျဆိုငျကွပါစလေို့ တောငျးဆု မတ်ေတာပွုလကျြ….
မီးတွင်းကာလ အယူအဆမှားများနှင့်​ သတိပြုစရာ​လေးများ
” ကိုးလ လွယ်​ ဆယ်​လ ဖွား ” အမျိုးသမီး​တစ်​​ယောက်​ ကိုယ်​ဝန်​စရှိတာနဲ့ “မဗိုက်​ မဗိုက်​”နဲ့ .. အိမ်​က လူ​တွေ သဲသဲလှုပ်​ ဂရုစိုက်​ကြသကိုး… ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​​နေတုန်းလည်း က​လေးအတွက်​ ပူရ… အ​မေအတွက်​ ပူရနဲ့…. ​ဆေးနည်းဆိုတာ တစ်​​ယောက်​တမျိုး… ရိုးရာနဲ့ မကိုက်​ဖူး… ​နေ့နံနဲ့ မလိုက်​ဖူး.. ​မွေးမယ့်​ချိန်​​ရွေးပါဟဲ့… ရက်​​ကောင်းမှ မြတ်​မယ်​… ဒီလို ​မွေးလာမယ့်​ က​လေးကို ချစ်​ကြသလို မမဗိုက်​ကိုလဲ ချစ်​ကြ​တော့…ဟိုဟာစိတ်​မချ ဒီဟာ စိတ်​မ​ဖြောင့်​.. ​​မွေးဖွားပြီးသည့်​တိုင်​ ​ဗျာများကြသကိုး…
​​ဒါတင်​လားဆို​တော့ မဟုတ်​​သေး… မီးဖွားပြီးတဲ့အခါမှာလည်း ဟိုဟာ မစားရ ဒီဟာ မစားရ .. က​လေးနဲ့ မတည့်​ အ​မေနဲ့မတည့်​.. ဒါမျိုး​တွေ ​ပြောရင်းက လွဲမှား​နေတာ​လေး​တွေ ရှိတတ်​ပြန်​ပါတယ်​… ဒီလို အယူအဆ မှား​လေး​တွေနဲ့ သတိထားသင့်​တဲ့အချက်​​ အချို့ကို ​ပြောပြချင်​ပါတယ်​…
” ​ရေ​အေး မ​သောက်​ရဘူး.. အနာမကျက်​ပဲ​နေမယ်​… ​ရေ​နွေး (သို့) ပူ​နွေး​နွေးအရည်​​လေးပဲ​သောက်​ ”
– မီးတွင်းကာလမှာ ​ရေ​အေး​သောက်​ရင်​ အ​အေးမိ ​ချောင်းဆိုးမယ်​… က​လေးကို နို့တိုက်​တဲ့ခါ ကူးမယ်​… အ​အေး​ကြောင့်​ အနာကျက်​​နေ​စေမယ်​ စသဖြင့်​​ စိုးရိမ်​စိတ်​နဲ့ ​ပြောကြပါတယ်​… သို့​ပေမယ့်​ .. ​ရေ​အေး​ကြောင့်​မို့ မီး​နေသည်​ကို ထိခိုက်​တာမျိုး မရှိနိုင်​ပါလို့.. သု​တေသနပြလုပ်​သူများက ဆိုကြပါတယ်​.. ဒါပြင်​ အပူပိုင်း​ဒေသက မိခင်​တို့အတွက်​ ပူပြင်းရတဲ့ထဲ ​ရေ​နွေးပူကို​သောက်​​နေရတာ ခက်​လှပါတယ်​.. မိခင်​ဟာ က​လေးကို နို့ချိုတိုက်​​ကျွေးဖို့ လုံ​လောက်​တဲ့ ​ရေပမာဏ ရရှိဖို့သာ အဓိက ဖြစ်​ပါတယ်​.. ဒါ​ကြောင့်​ စိတ်​ထဲ ရှိတာ ​သောက်​ပါ​စေ…
“အရွက်​​တွေ မစားနဲ့.. အသားဆို ဟိုအသား ဒီအသား​ရှောင်​ ”
– ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​​နေစဉ်​ကလည်း ဝမ်းကြာတိုက်​ထဲက သ​န္ဓေသား​လေးအတွက်​ မိခင်​ဟာ အားရှိ​နေဖို့ လိုသလို.. မီးဖွားပြီးကာလမှာ.. အားအင်​ပြန်​ပြည့်​ဖို့ရယ်​.. က​လေးကို နို့တိုက်​ဖို့ရယ်​အတွက်​ ပိုမို အားဖြည့်​တင်းရပါမယ်​.. ဒါ​ကြောင့်​ အာဟာဖြစ်​​သော အသီးအနှံ၊ အသားငါး အကုန်​​ကျွေးနိုင်​ပါတယ်​..
” က​လေးကို နို့တိုက်​တဲ့အခါမှာ မိခင်​ပိန်​သွားတတ်​တယ်​ဆိုတဲ့ အယူအဆ “ဟာ မှားပါတယ်​ … မိခင်​အတွက်​ လုံ​လောက်​တဲ့ အဟာရ ရရှိ​အောင်​ စား​သောက်​ရုံဖြင့်​ က​လေးကိုလဲ နို့တိုက်​နိုင်​သလို မိမိလဲ ဝိတ်​မကျသွားပါဘူး…
-တချို့​သော မိခင်​​တွေမှာ မိမိနဲ့ မတည့်​တဲ့ အစားအစာမျိုး ၊ allergy ထတတ်​တာမျိုးဆိုရင်​​တော့ တခါတရံမှာ က​လေးကိုသာ သက်​ရောက်​နိုင်​တာမို့ .. ​ရှောင်​သင့်​ပါတယ်​
– ” အရက်​ ” ​သောက်​တတ်​တဲ့ မိခင်​​တွေ အဖို့ မီးတွင်းကာလ​ရော ​မွေးဖွားပြီး ​လေးငါးလထိ အရက်​မ​သောက်​သုံးသင့်​ပါဘူး… သို့မဟုတ်​ပါက မိခင်​နို့ရည်​ထဲက alcohol ဟာ က​လေးဆီ​ရောက်​သွားနိုင်​ပါတယ်​..မိခင်​ကဲ့သို့မဟုတ်​ပဲ က​လေးရဲ့ အသည်းဟာ သိပ်​မဖွံ့ဖြိုး​သေးတာမို့ အသည်းကို ထိခိုက်​​စေနိုင်​ပါတယ်​
-ကဖင်းဓာတ်​များလွန်းတဲ့ဟာ​တွေ မ​သောက်​ပါနဲ့.. က​လေး အအိပ်​နည်းတာ…ကနာမငြိမ်​တာ​တွေ ဖြစ်​တတ်​ပါတယ်​…
– အစားအ​သောက်​​တွေဟာ အဟာရ မျိးစုံအရသာ မျိုးစုံ ပါဝင်​ပြီး.. တချို့​သော အစားအ​သောက်​​လေး​တွေရဲ့ အရသာက မိခင်​ရဲ့နို့ရည်​မှတဆင့်​ က​လေးကိုပါ ​ပေးစွမ်းနိုင်​တာမို့ က​လေး​လေးလဲ အရသာ စမ်းလို့ရပြီ​ပေါ့..
“မီး​နေသည်​ဆိုတာ.. ​နွေး​နွေး​ထွေး​ထွေး​နေရမယ်​.. အ​အေးမခံနဲ့… ​လေးစိမ်းတိုက်​မခံနဲ့.. ပန်​ကာ အဲကွန်း မဖွင့်​နဲ့ … ​ရေမချိုးရဖူး​နော်​…”
– မီး​နေသည်​နဲ့ က​လေး​ ​နေထိုင်​ရမခက်​ဖို့ကသာ အဓိက ဖြစ်​ပါတယ်​.. အဲကွန်းပန်​ကာ ဖွင့်​ခြင်းက မထိခိုက်​​စေနိုင်​ပါဘူး.. ဒါပြင်​ အပူ​ကြောင့်​ ထွက်​တဲ့ အဖုအပိမ့်​​တွေကိုလဲ သက်​သာ​စေနိုင်​ပါတယ်​…
– သာမန်​လူဖြစ်​ဖြစ်​ မီး​နေသည်​ ဖြစ်​ဖြစ်​.. တကိုယ်​ရည်​ သန့်​ရှင်းမှုဟာ အ​ရေးပါလှပါတယ်​.. ဒါ​ကြောင့်​ ပုံမှန်​ ​ခြေ​ထောက်​လက်​​တောက်​​ဆေးခြင်း၊ ​ရေချိုးခြင်း ပြုလုပ်​နိုင်​ပါတယ်​… အ​ရေပြားမှ အနာကို ပိုးမွှားကူးစက်​တာ​တွေကိုလဲ ​လျေ့ာပါး​စေနိုင်​ပါတယ်​..
– မီးဖွားပြီး ​နောက်​ပိုင်းမှာလဲ အားအင်​ အလုံအ​လောက်​ရှိဖို့ အား​ဆေး​တွေ ဆက်​​သောက်​နိုင်​ပါတယ်​…
– ​သွေးများစွားဆုံးရှုံးထားတဲ့အတွက်​ ပြန်​လည်​ဖြည့်​တင်းဖို့ရာ လိုအပ်​​သော ​​ဆေးကို ဆရာဝန်​မှ ညွှန်​ကြားထားသည့်​အတိုင်း​သောက်​ပါ..
– တချို့ အမျိုးသမီး​တွေဟာ ​မွေးဖွားပြီးချိန်​မှာ စိတ်​ဓာတ်​ကျတာ၊ ဝမ်းနည်း အားငယ်​တာ​တွေခံစားရတတ်​တာမို့်​မိသားစုမှ ​နွေး​ထွေးကြင်​နာပါ…
ကျန်းမာသာယာ ​ပျော်​ရွှင်​​သော မိသားစု ဘဝကို ပိုင်​ဆိုင်​ကြပါ​စေလို့ ​တောင်းဆု ​မေတ္တာပြုလျက်​….
Does Corn Bother you?